Guy Pearce – Cast – Channel Myanmar
The King’s Speech (2010) သိက္ခာက အင်္ဂလိပ်တွေအတွက် အသက်၊ လွတ်လပ်ခြင်းက အမေရိကန်တွေအတွက် အသက် ၊စည်းကမ်းက ဂျပန်တွေအတွက်အသက် .......... ဒီဇာတ်ကားက သမိုင်းကို ပြန်လည်အ သက်သွင်းရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့သော် အမှန်တကယ်ဖြစ်ရပ်မှန်အတိုင်း တစ်သွေမတိမ်း ရိုက်ကူးထားခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရိုက်ကူးသူ၏ စိတ်လိုရာ ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီး လိုသလို အနုပညာ ကို အစွမ်းပြထားသည့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ အချိန်ကာ ၁၉၃၆ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ နေရာကာ ဘာကင်ဟမ်နန်းတော် ကိုယ်အရူး အမှုးချစ်ရတဲ့အချစ်အတွက်ချစ်သက်သေပြဖို့ ၊တာဝန်ယူဖို့၊ မသိပ်ငယ်စေဖို့၊ သမိုင်းမှာဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးထဲကတစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားမယ့် လက်မှတ်တစ်ချက်ကို ကိုယ်စာရွှက်ပေါ်မှာထိုးလိုက်ပါပြီ။ အနုပညာပိုင်းရော ငွေကြေးပိုင်ရောမှာပါအောင် မှုကြီးကြီးမားမားရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီသမိုင်းရုပ်ရှပ် ကို The Weinstein Company နဲ့Momentum Pictures တို့ဖြန့်ချီထားခဲ့ပါတယ်။ IMDb 8/10 ၊ Rotten Tomatoes 95% ၊Common Sense5/5၊ CinemaScore A+တို့ ရရှိ ထားပါတယ်။ ၂၀၁၀ စက်တင် ဘာမှာ Telluride ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ စတင်ပြသခဲ့ ပြီး ၂၀၁၁ ရောမှာ ဗြိတိန်မှာ ပြသခဲ့ပါတယ်။ တစ်ကားလုံးကို ကြာချိန် ၁၁၉ မိနစ်ရှိပြီး အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကားပြောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ဂျက် ဒေါ်လာ ၁၅ မီလီယံနဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး Box Office ...
Spinning Man (2018) လူမှုရေးနယ်ပယ်ထဲက ထိလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ကိစ္စတွေထဲမှာ ဖောက်ပြန်တာကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဖောက်ပြန်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ဒဿနိကဆရာ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မလဲ? တောင်ခါးပန်းမြို့လေးမှာ အထက်တန်းကျောင်းသူလေးတစ်ယောက် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်။ အထက်တန်းကျောင်းသူဆိုပေမဲ့ တက္ကသိုလ်တက်ဖို့ စောင့်နေတဲ့ ကျောင်းသူလေးပေါ့။ တောင်ခါးပန်းမြို့လေးမှာ ကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိတယ်။ အဲဒီ ကန်ကြီးမှာ ကရက်လှေတွေငှားတယ်။ သူက ကရက်လေငှားတဲ့နေရာမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်မလေးပေါ့။ ရုတ်တရက်ကြီး သူဘာကြောင့်ပျောက်ဆုံးသွားလည်းဆိုတာကို ဘယ်သူမှ အဖြေရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်။ အလောင်းလည်း မပေါ်လာဘူး။ ရဲစုံထောက်တွေက အမှူနောက်ကို လိုက်ရင်းနဲ့ကနေ ဒဿနိကဆရာရဲ့ကားကို ကန်နားမှာတွေ့လိုက်တယ် လို့သတင်းရလိုက်တယ်။ ဒါဆို ဒီဆရာက ဘာလဲပေါ့။ ကျောင်းသူတွေနဲ့ ဇာတ်ရှုပ်နေတာလား? ဒါမှမဟုတ် တိုက်ဆိုင်တာပဲလား? ကောင်မလေးကို ဖမ်းခေါ်သွားတာက အမည်မသိတဲ့ ရာဇဝတ်သားတစ်ယောက်ပဲလား? အဲဒီလို အနောက်ကလိုက်ရင်းကနေ အတွေးခေါ်အယူဆတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာ စုံထောက်နဲ့ ဒဿနိကဆရာတို့ရဲ့ အားပြိုင်မှုတွေကို ရှိလာပါတော့တယ်။ အမှန်တော့ သူတို့နှစ်ဦးလုံးက တစ်လမ်းထဲကို သွားနေတဲ့လူတွေပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ နှစ်ယောက်လုံးက အဖြေကို ရှာတွေ့ချင်နေတဲ့လူတွေလေ။ ဒဿနိကဆရာက အတွေးအခေါ်တစ်ခုရဲ့ အဖြေကိုရှာဖွေနေတယ်။ ရဲစုံထောက်က အမှုရဲ့ အဖြေကို ရှာဖွေနေတယ်။ ဒါဆို ...
Holding the Man (2015) ကဲ အခုတစ်ခါတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ BL ကားလေးတစ်ကားကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Bl ပရိတ်တ်ကြီးတွေ ကွီးယား တို့ တရုတ်တို့လို သေးသေးကွေးကွေး BL Ship တာတွေပဲ ကြည့်နေကြတာတွေ့တော့ သိပ်အားမရမိတာမို့ အားရပါးရ Ship တဲ့ ကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကားလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ LGBT ကို Support လုပ်တဲ့အနေနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ ဒီကားလေးက လူအခွင့်အရေး တစ်ခု ကိုပါ မီးမောင်းထိုး ပြထားတာပါ တကယ်တော့ LGBT ဆိုတာလဲ လူတွေထဲက လူတွေပါပဲ သူတို့ဖာသာ ၂ဦးသဘောတူ ကြိုက်က ချစ်ကြတာကို အပြစ်တစ်ခုအနေနဲ့တော့ မပြောသင့်ဘူးလို့ ထင်မိပါတယ် သူတို့မှာလဲ သူတို့ ကြိုက်ချင်တဲ့သူ ချစ်တဲ့သူနဲ့ တွဲဖို့ အခွင့်အရေးရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့်ဒါကို အပြစ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြောနေတာကိုတော့ ရှုတ်ချမိပါတယ် ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ၁၉၇၀ ကာလကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ သြစတေးလျသား လူငယ်၂ယောက်ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းလေးကို ဖော်ကျူးပြထားတာပါ ကဲ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုသွားလိုက်ကြရအောင် ဇာတ်လမ်းကတော့ ...
IMDB: 7.3/10 6,377 votes
Memento (2000) IMDb (8.5) Rotten Tomatoes (92%) =================== Memento (2000) သူ.........ည တစ်ရေးနိုးလာခဲ့သည်။ အိပ်ရာပေါ်က သူ့ဘေးမှာ သူ့ဇနီးရှိမနေ။ အပေါ့သွားတာဖြစ်ရမည်။ အင်း..........မဟုတ်သေးဘူး။ သူ့စိတ်ထဲမှာ သူ့ရဲ့ဇနီး အိပ် ရာပေါ် ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့မှာကို တစ်နည်းတစ်ဖုံ သိနေသည်။ ရေချိုးခန်းထဲက ရုန်းရင်းဆန်ခတ်အသံတွေ......................ရိုင်းစိုင်းမှုတွေ...............အသနားခံမှုတွေ.........။ သေချာသွားပြီ.........သူ့ဘဝထဲမှာ သူ့ဇနီးရှိမနေတော့ဘူး။ အဲဒါကလွဲပြီး ကျန်တာသူမသိ။ မနေ့ညက သူဘာလုပ်ခဲ့လဲ၊ မနက်လင်းရင်သူဘာလုပ်ရမှာလဲ သူမသိ။ သူ့ကိုယ်ပေါ်က tattoo တွေ ဘယ်လိုပေါ်လာလဲသူမသိ။ သူ မှန်ရှေ့မှာရပ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ မှန်စာလိုရေးထားတဲ့ အထင်ရှားဆုံး tattoo ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ "John G. raped and murdered my wife." Christopher Nolan ဟာ Following ဆိုတဲ့ ဒေါ်လာ 6000 လောက်သာကုန်ကျတဲ့ ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးပြီး ဒါရိုက်တာအဖြစ် ခြေလှမ်းစခဲ့တယ်။ အဲဒီကားနဲ့ သူ့ကိုစတင်အာရုံစိုက်စေခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ဒုတိယကားမှာတော့ ဒေါ်လာငါးသန်းလောက် budget ရခဲ့ပါတယ်။ ...
IMDB: 8.5/10 940,103 votes
Don’t Be Afraid of the Dark (2010) Weekend မှာ အေးဆေးဖီးလ်ဖို့ ဥစ္စာစောင့်တွေ ဒဏ္ဍာရီတွေ ပါတဲ့ ထူးဆန်းထွေလာ သည်းထိတ်ရင်ဖိုဇာတ်ကားလေးတစ်ကား တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ နာနာဘာဝတွေဟာ သနားစရာလည်းကောင်းသလို ကြောက်စရာလည်းအင်မတန်ကောင်းလှပါတယ်။ သူတို့ဟာလူ့အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ တစ်နည်းနည်းတဖုံဖုံနဲ့ ဆက်နွယ်နေရပါတယ်။ ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ နာနာဘာဝတွေရှိသလို ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ နာနာဘာဝတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားလေးတဲ့ကျောရိုးကတော့ နာနာဘာဝ တွေထဲကမှ ဆိုးကျိုးတွေပေးတဲ့ ဥစ္စာစောင့် လေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ ---------------------------------------------------------------------------------------------- အဲလက်တစ်ယောက် ကလေးနဲ့မိန်းမကိုပစ်ပြီး ဒီဇိုင်နာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ဖို့တာစူနေပါတယ်။ သမီးလေး(ဆယ်လီ)ကိုသံယောဇဉ်မကင်းတာကတစ်ကြောင်း တာဝန်မကင်းတာကတစ်ကြောင်းမို့ ဒီဇိုင်နာမလေး ခင်နဲ့နီးစပ်စေရန်ခေါ်ထားပါတယ်။ အဲလက် ဟာ ဒီဇိုင်နာခင်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ရှေးဟောင်းအိမ်ကြီးတစ်လုံးကို လေလံဆွဲပြီး သမိုင်းပညာရှင်တွေရဲ့အကူညီနဲ့ ပြန်လည်မွမ်းမံပါတော့တယ်။ သူတို့လေလံဆွဲထားတဲ့ အိမ်ကြီးက နိုင်ငံကျော်အနုပညာရှင်ကြီးရဲ့အိမ်တစ်လုံးပါ။ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွက်ချက်က သမိုင်းဝင်အိမ်ကြီးကို အနုစိတ်ပြန်မွမ်းမံပြီး လေလံပြန်တင်ဖို့ပါ..။ ဒါပေမဲ့ ဒီအိမ်ကြီးမှာ သူတို့မသိတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် အဖြစ်ဆိုးအတိတ်ကြီးရှိနေတာကို သူတို့ မသိပါဘူး..။ အဲဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးက အိမ်ကြီးပြန်လည်မွမ်းမံပြီးတဲ့နေ့မှာပဲ ပြန်လည်နိုးကြားလာပါတော့တယ်။ ...
IMDB: 5.6/10 42,361 votes
The Time Machine (2002) အချိန် ဆိုတာ လူတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ အရာတစ်ခုပါ။လူတွေ အချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းလာကျတယ်။ ကျော်ဖြတ်သွားကျတယ်။နောက်တစ်နေ့ရောက်တဲ့ အခါမှာ အရင်နေ့က အမှားတွေရဲ့ အကျိုးဆက်တွေ ရလာဒ်တွေကို ကြုံရတဲ့ အခါ ငါ အရင် အချိန်တွေကို ပြန်သွားလို့ရရင် ကောင်းမှာ ဆိုပြီး တွေးတက် ကျပါတယ်။အဲ့အတွေးတွေကနေ စပြီး Time Travel အချိန်ခရီးသွားခြင်း ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေတ်ပေါင်းများစွာ ဖြတ်သန်းပြီးတာတောင် ဒီနေ့အထိ လူတွေ စိတ်ကူးယဉ်နေကျဆဲ ပါပဲ။ H.G Wells ရဲ့ နာမည်ကျော် ၀တ္ထု ကို ပြန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားဟာ ဆိုရင်လည်း Time Travel အကြောင်းကို ရိုက်ကူးထားတာပါ။ပါမောက္ခ အလက်ဇန္ဒား ဟာဆိုရင် ထူးချွန်တဲ့ အလုပ်ကြိုးစားတက်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။သူ့ဘ၀ဟာအေးဆေး ဆိတ်ငြိမ်ပြီး သူ့ကျောင်းသားတွေ သူ့သုတေသနတွေ နဲ့ ပျော်မွေ့နေတက်သူပါ။သူဟာ မကြာခင်မှာသူချစ်ရတဲ့ ချစ်သူဖြစ်တဲ့ အမ်မာ ကို ...
IMDB: 5.9/10 107,624 votes
Alien: Covenant (2017) ဒီတစ်ပတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အပန်းဖြေဖို့ကိုတော့ သည်းထိတ် ရင်ဖိုစိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံအက်ရှင် ကား Alien:Covenant ကို ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ၂၀၁၂ က ထွက်ခဲ့တဲ့ Prometheus ဇာတ်ကားရဲ့ အ ဆက်အဖြစ် ထွက်ရှိလာတဲ့ ဂြိုဟ် သားရုပ်ရှင်စီးရီးဖြစ်ပြီး ဒါရိုက်တာရစ်ဒလေစကော့ရဲ့ လက်ရာဖြစ် ပါတယ်။ Covenant ဆိုတဲ့ ယာဉ်ပျံ ကြီးပေါ်က အဖွဲ့သားတွေဟာ အာကာသ ဟင်းလင်းပြင် အစွန်အ ဖျားက ဂြိုဟ်တစ်ခုကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူနဲ့မှ မထိတွေ့ရသေးတဲ့ ကောင်းကင် ဘုံတစ်ခုလို့ ထင်ခဲ့ပေမယ့် တကယ်တမ်းကတော့ သက်ရှိ ရယ်လို့ ဘာမှမတွေ့ရတဲ့ အမှောင်ထုလွှမ်းနေတဲ့ အန္တရာယ် ကမ္ဘာ ကြီးတစ်ခုပါ။ အဲဒီဂြိုဟ်ပေါ်ကို ဆင်းပြီး လေ့လာကြတဲ့အခါမှာ ပျက်စီး နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာယာဉ်ပျံတစ် ခုကို ခြေရာခံမိခဲ့ကြပါတယ်။ နောက်တော့ ယာဉ်ပျံပေါ်က လူတချို့က ဂြိုဟ်သားရောဂါပိုး မတော်တဆ ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီး အဲဒီလူတွေထဲကနေ ဂြိုဟ်သား ...
IMDB: 6.7/10 99,279 votes
Bedtime Stories အိပ်ရာဝင်ချိန်ဆိုတာ လူသားတိုင်းရဲ့တစ်နေ့တာမှာအငြိမ်းချမ်းဆုံးအနားယူတဲ့အချိန်လေးပါ အိပ်ရာဝင်ချိန်မှာ ယုံတမ်းပုံပြင်များကိုနားထောင်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့အိပ်စက်ခဲ့ရပါတယ်.... အခုလည်း Disney ရဲ့အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်လေးကို ကြည့််ပြီးတော့ ဒီညအိပ်မက်တွေကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပြီးတော့ ပေါက်တတ်ကရတွေမက်လိုက်ရအောင်.... ငယ်ငယ်တုန်းက အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်လေးတွေ နားထောင်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ပုံပြောကောင်းတဲ့ အစ်ကိုကြီးအစ်မတွေဆီကနေ တစ္ဆေသူရဲပုံပြင်တွေ အဘိုးအဘွားတွေဆီကလည်း “ တို့တွေခေတ်တုန်းက ဘယ်လို၊ တို့ငယ်ငယ်တုန်းက ဘယ်လို” စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ နားထောင်ခဲ့ဖူးကြပါတယ် ။ အပြောကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆို သူတို့ဇာတ်လမ်းလေးမှာ စီးမျောရင်း အချိန်တွေကုန်မှန်းတောင် မသိခဲ့ဘူး။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ စကီတာ ဆိုတဲ့ ဦးလေးလူပျိုကြီး တစ်ယောက် သူ့တူလေးနဲ့ သူတူမလေးကို သူတို့အမေခရီးသွားတုန်း တစ်ပတ်လောက် ညဖက်တွေမှာ ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးဖို့ အကြောင်းပေါ်လာတယ်။ သူကလည်း လူပျိုကြီးဆိုတော့ ကလေးမထိန်းတတ် အိပ်ရာဝင်ပုံပြင်ပြောရတော့မယ်ဆိုတော့ ပုံပြင်စာအုပ်ထဲက ဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်း သူမကြိုက်ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူရဲ့အကြောင်းကို ရာဇ၀င်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက သူရဲကောင်းတွေနဲ့ရောပြီး ပေါက်တက်ကရတွေ လျောက်ပြောတော့တာပဲ။ သူကပြောလိုက် သူ့တူလေးတူမလေးတွေလည်းက ဇာတ်လမ်းပြင်ပြောလိုက်နဲ့ လုပ်နေကြတာပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း ...
IMDB: 6.1/10 75,909 votes